CPA VS. Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင် - Which Is Better? [It's A Close Call]
, CA vs တကြ် CPA (Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်): သငျသညျအဘို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?
23 သြဂုတ် , CA vs တကြ် CPA (Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်): သငျသညျအဘို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?
ဘယ် သာ. ကောင်း၏? ဘယ်သတ်မှတ်ရေးသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကူညီပေးပါမည်? စာရင်းကိုင်အတွက်အလုပ်အကိုင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ခြင်းလိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျတကြ် CPA သို့မဟုတ်, CA အကြားရွေးချယ်ဖို့တစ်အကြပ်အတည်းအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. ပေါ်ပေါက်သောသော့ချက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတကြ် CPA သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုသို့မဟုတ်, CA အကျိုးရှိမရှိဖြစ်ပါသည်? နှစ်ဦးစလုံးအရည်အချင်းများသင့်ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကြီးထွားဖို့ကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောဆုရှင်ရှိပါတယ်, စာရင်းကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ. လည်း, တကြ် CPA နှင့်, CA ကိုင်ဆောင်သူအညီအမျှလုပ်ငန်းသုံးနဲ့အများသုံးစာရင်းကိုင်အနှံ့ပြန့်နှံ့စေခြင်းငှါကျွေးမွေး - ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအရည်အချင်းများစက်မှုလုပ်ငန်းတလွှားအလုပ်လုပ်အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထောက်ပံ့. ဒီအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းတစ်ခုချင်းစီပါဝငျသောအရာကိုကြည့်ခြင်းနှင့်နှစ်ခုအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားချက်ကိုယူကြစို့.
တစ်ဦး, CA ကဘာလဲ?
, CA vs တကြ် CPA: အလုပ်ရှာဖွေရေး Path ကို
, CA vs တကြ် CPA: လစာ
, CA vs တကြ် CPA: အချိန်လိုအပ်ချက်များ
, CA vs တကြ် CPA: လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လိုအပ်ချက်များ
ဒါကြောင့်, သငျသညျအဘို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?
တစ်ဦးကလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များသူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါသည် ထို CPA စာမေးပွဲတွင်လွန် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအမေရိကန်အင်စတီကျုအားဖြင့်ပေးထား (AICPA) နှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုတာတွေနဲ့ဆက်စပ်ပညာရေးနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်များကိုသမျှတို့ကိုပြည့်စုံ. ဤရွေ့ကားပညာရှင်များသည်အမေရိကန် GAAP အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်, အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ဝင်ငွေခွန်, ထိုကဲ့သို့သောစာရင်းစစ်အဖြစ်အမေရိကန်စာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးပညတ်တရား၏အများနှင့်အခြားဒေသများ. ဒီလက်မှတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းလေးစားပေမယ့်, အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်စာရင်းကိုင်အတွက်အရည်အချင်းနှင့်စာရင်းစစ်များနှင့်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းလက်မှတ်ပါတဲ့အမေရိကန်သတ်မှတ်ရေးရဲ့.
တစ်ဦးက Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင် (, CA) အဆိုပါ, CA စာမေးပွဲနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏သူသို့မဟုတ်သူမ၏တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးလွန်ပြီသူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါသည်. CAS များအတွက်ပညာရေးနှင့်စာမေးပွဲများကိုအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်. အနည်းငယ်ဥပမာစကော့တလန် Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်၏ Institute မှပါဝင်သည် (ICAS), အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင် Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်များ၏အင်စတီကျု (ICAEW), အိန္ဒိယ Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်များ Institute က (Ichhai) နှင့် Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်၏ကနေဒါ Institute က (CICA ။) ကနေဒါ Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်, သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်, မက္ကစီကိုနှင့်အိုင်ယာလန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုသဘောတူညီချက်ရှိ. သူတို့အနေနဲ့တခုတော့စာမေးပွဲနိုင်လျှင်, သူတို့က U.S အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်. CPAs အဖြစ်. CAS IFRS နှင့်အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်. သူတို့ကအမေရိကန် GAAP အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးဆုပ်ကိုင်ရှိစေခြင်းငှါသော်လည်း, ဒီဧရိယာ၌လေ့ကျင့်သင်ကြားအဖြစ် CPAs ဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့မဟုတ်.
အဆိုပါတကြ် CPA သတ်မှတ်ရေးသင်တို့အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့တကြ် CPA လက်မှတ်ရတဲ့ပြီးနောက်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစာရင်းကိုင်လယ်ကွင်းအောက်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်, internal & ပြင်ပစာရင်းစစ်, တိုင်ပင်န်ဆောင်မှုများ, Forensic စာရင်းကိုင်, အာမခံချက်န်ဆောင်မှုများ, အခွန်ကောက်ခြင်း & ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းစသည်တို့ကို. ယင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုအတူ, သင်သည်များစွာသောနိုင်ငံများတွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. အလားတူပင်, , CA သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းသင်တို့ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောစာရင်းစစ်အဖြစ်စာရင်းကိုင်၏အထူးပြုနယ်ပယ်များတွင်အများအပြား options များပေးသွားမှာပါ, အခွန်ကောက်ခြင်း, ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေး, ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာဥပဒေ. သင့်ရဲ့, CA အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရတဲ့ပြီးနောက်သင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ စာရင်းကိုင်ပညာ၏ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီး သို့မဟုတ်သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလေ့အကျင့်ကိုစတင်နိုင်ပါသည်.
CPAs နှင့် CAS လစာနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ပထဝီတည်နေရာပေါ်မူတည်, အလုပ်အကိုင်အမည်, နှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း. ထို့ကြောင့်, သူတို့အကြီးအကျယ်ကွဲပြား. အဆိုပါ U.S အတွက်တကြ် CPA များအတွက်ပျမ်းမျှလစာ. ဖြစ် $62,410 နှင့် U.K တစ်ဦး, CA များအတွက်ပျမ်းမျှလစာ. £ 34.637 ဖြစ်ပါတယ် ($44,849 အမေရိကန်ဒေါ်လာ). နှစ်ဦးစလုံးအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းကြီးမားသောလစာအထက်သို့ mobility ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် $150,000 အတှေ့အကွုံမြား၏အနေအထားနှင့်အဆင့်အထိပေါ် မူတည်. နှစ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို.
ဒါဟာအချိန်လိုအပ်ချက်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တကြ် CPA ဖြစ်လာမှအနည်းငယ်ပိုရိုးရှင်းတဲ့င်. သငျသညျပြီးစီးခဲ့ပါပြီရမယ် 150 ဘွဲ့ကြိုအကြွေးနာရီနှင့်သငျသညျလညျးတကြ် CPA ၏တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်နာရီပေးထားသောအရေအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပြီ 18 ထိုင်အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံလများ ထို CPA စာမေးပွဲတွင်၏လေးယောက်အစိတ်အပိုင်းများ. ဒါကြောင့်, အဲဒီအကြောင်းယူနိုင်ခဲ့ 8 1/2 တကြ် CPA ဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း (ဘွဲ့ကြိုအလုပ်၏ငါးနှစ်အတွင်း, အလုပ်အပေါ်နှစ်နှစ်နှင့် 18 ထို CPA စာမေးပွဲမှလပေါင်းများစွာ). ဘယ်လောက်ကြာက, CA ဖြစ်လာဖို့အချိန်ယူသင်၌လေ့ကျင့်နှင့်ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတှေ့အကွုံသင့်ရဲ့အဆင့်အထိစီစဉ်ထားသောအရာကိုတိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်. ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, အဆိုပါ ICAS လေးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်:
ကျောင်းနေ leavers များအတွက်တိုက်ရိုက် entry ကိုလမ်းကြောင်း, တစ်ဦး ICAS-approved အလုပ်ရှင်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေး၏ငါးနှစ်လိုအပ်ပါတယ်ရာ;
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရဘို့ဘွဲ့လွန် entry ကိုလမ်းကြောင်း, တစ်ဦး ICAS-approved အလုပ်ရှင်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးသုံးနှစ်လိုအပ်ပါတယ်ရာ;
အတွေ့အကြုံရှိဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် Professional က entry ကိုလမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်ဒီဂရီနှင့်အတူထူထောင်ပညာရှင်များအဘို့ဖြစ်၏ (တရားဝင်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်နှင့်ညီမျှအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ငါးနှစ်နှင့်
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းကိုင်ပညာ၏ Chartered ဘဏ်ဟာအင်စတီကျု၏အဖွဲ့ဝင်များခွင့်ပြုသောလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း (CIPFA) ICAS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာနှင့်, CA သတ်မှတ်ရေးဝင်ငွေဖို့အခွင့်အလမ်း.
နှစ်ခုလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်; တဦးတည်းအစီအမံသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခြား, လက်တွေ့ကျတဲ့အရည်အချင်းကို. နှစ်ဦးစလုံးလမ်းကြောင်း Post-အရည်အချင်းများအတွေ့အကြုံ၏ခုနစ်နှစ်လိုအပ်. အကောင်းဆုံး "ပန်းသီး-to-ပန်းသီး" နှိုင်းယှဉ်ကြ် CPA = ICAS Pathway ပါလိမ့်မယ် #2.
ဘယ်လောက်ကသင့်တကြ် CPA လိုင်စင်ရဖို့ကုန်ကျ variable ကိုဖြစ်ပါတယ်. အားလုံးပြည်နယ်များကိုသင်လိုအပ်သောသင်တန်းများများစွာအပါအဝင်အတူစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘွဲ့များနိမ့်ဆုံးဝင်ငွေကြောင့်လိုအပ်. အားလုံးနီးပါးပြည်နယ်များသင်သည်အနည်းဆုံးဝင်ငွေကြောင့်လိုအပ် 150 အကြွေးဝယ်နာရီအဖြစ်ကောင်းစွာ. ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့တကြ် CPA ပညာရေးဆိုင်ရာသင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးဝင်ငွေမှတစ်ဦးမာစတာဘွဲ့ကိုလိုက်လျှင်ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါမည်လိုအပ်ပါတယ် 25 ကောလိပ်ကရက်ဒစ်နာရီသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့အစီအစဉ်ကိုပိုမိုအတန်းယူ. အဆိုပါလက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုသူ့ဟာသူအကြောင်းကိုကုန်ကျမည် $3,000 တစ်ဦးအပါအဝင် သင့်လျော်သောတကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်း နှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုအခကြေးငွေ. သင်စာမေးပွဲပြီးနောက်, သင်သည်လည်းနှစ်စဉ်ဆက်လက်ပညာရေးခရက်ဒစ်နှင့်အတူခိုင်လုံသောသင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဤရွေ့ကားစျေးနှုန်းကွဲပြားပေမယ့်အကြားအများဆုံးကုန်ကျစရိတ် $50-$100 အကြွေးတစ်နာရီလျှင်. အများစုမှာပြည်နယ်တဝိုက်လိုအပ် 40 တစ်နှစ်လျှင်ခရက်ဒစ်. သော်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့. သင်တစ်ဦးအများပြည်သူစာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီတခုမှာအလုပ်ရခဲ့လျှင်, သူတို့သည်သင်၏ဆက်လက်ပညာရေးအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦး, CA ဖြစ်လာဘို့ကုန်ကျစရိတ်သင်၌နထေိုငျတိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်, သင့်ရဲ့ပညာရေးနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းကသင်သည်သင်၏အထောက်အထားများရယူဘို့ရန်လျှောက်ထား.
ဥပမာ, သငျသညျ ICAS ဖို့လျှောက်ထားကြသည်နှင့်သင် Pathways ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် #1 နှင့် #2 (ကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကနေတိုက်ရိုက် entry ကို) ထို့နောက်သင့်အလုပ်ရှင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်. သငျသညျ Pathway များအတွက်ရွေးချယ်လိုလျှင် #3 (အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား Professional က), £ 13.900 - ကုန်ကျစရိတ်အကြမ်းဖျင်း£ 5.750 များမှာ. လမ်းကြောင်း #4 (CIPFA အဖွဲ့ဝင်များအတွက်) ကုန်ကျစရိတ်များသည့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု Pathway များအတွက်£ 1,035 များမှာ. အဆိုပါလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှု Pathway များအတွက်, ကုန်ကျစရိတ်များမှာ: သင်တန်းစာချုပ်များအတွက်£ 596; £ထားသော 1,547 - လူတန်းစားအခကြေးငွေများအတွက်£ 1,935; စာမေးပွဲကြေးများအတွက်£ 292 နဲ့နှစ်စဉ် ICAS / CIPFA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခွန်အခအဘို့အ£ 495. ဆက်လက်ပညာရေးနှင့်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ် အကယ်., သူတို့သည်သင့်အလုပ်လုပ်နေကြရသောတိုင်းပြည်ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်တွင်သို့မဟုတ်တစ်နိုင်ငံစုံကကုမ္ပဏီအတွင်းစိတ်ဝင်စားလျှင်, ပြီးနောက်သင်တကြ် CPA များအတွက်ရွေးချယ်သင့်တယ်. သင်ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးတကြ် CPA prep သင်တန်းများ ဒီမှာ. တစ်နည်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတင်ချင်လျှင် ငှေစာရငျးစစျဆေး အိန္ဒိယတွင်အလေ့အကျင့်, , CA များအတွက်ရွေးချယ်. ထို့အပြင်, ထိုတကြ် CPA စာမေးပွဲနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်, CA စာမေးပွဲတွင်လျော့နည်းအကုန်အကျဖြစ်ပါသည်. ဤအအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းမတဦးတည်းကအခြားထက် သာ. ကောင်း၏. သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်ရိုးရှင်းစွာကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အသုံးများမှာ. သငျသညျတည်နေရာကြောင်းပေးထားနှစ်ဦးစလုံးအထောက်အထားများနှင့်အတူတူညီလစာနှင့် ပတ်သက်. အောင်မြျှောလငျ့နိုငျ, အလုပ်အနေအထား, ကုမ္ပဏီ, နှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတူတူပါပဲ. ဒါဟာတကယ်ချသင်ပြုချင်သောအရာကိုမှကြွလာအဘယ်မှာသင်အလုပ်လုပ်ချင်. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 30 စက္ကန့်အကြာက
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, အထူးကမ်းလှမ်းချက် 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 17 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 21 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Yaeger တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု5လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Gleim တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အထူးကမ်းလှမ်းချက် 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Gryfina, သီးသန့်လျှော့ 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, သီးသန့်လျှော့ 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, Webinar 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အခြား 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်